बधाई लागि मानक कार्ड को थकित? म एक मूल र सस्तो प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ? या शायद तपाईं मुख्य उपहार विशेष कुरा पूरक गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि आफ्नो हातमा चकलेट र संकेत संग एक पोस्टर बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। यो एक धेरै मजा र रोमाञ्चक अनुभव छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा - यो पोस्टर इनाम दिनु अनुपम हुनेछ।
मीठो पोस्टर को प्रकार
पोस्टर। सामान्यतया पोस्टर बोर्ड को गरे। तपाईं भित्तामा झुन्डियो गर्न सक्ने राम्रो।
एक पोस्टर-किताब। Whatman मा आधा जोडेको छ पोस्टकार्ड को रूप। यो मिठाई मात्र होइन "आन्तरिक" पोस्टर, तर पनि धेरै आवरण व्यवस्था गर्न सम्भव छ।
आयोजक। पोस्टर-किताब समान। आधार बाक्लो फोल्डर छ। गत्ता, कागज, कपडा स्वाद जारी। यो आयोजक तालिका मा राख्न राम्रो हुन सक्छ।
ज्यामितीय। यो एक पोस्टर छ वा केहि को रूप मा बनाइएको पुस्तक। उदाहरणका लागि, हृदय को रूप मा। एक उपहार पूर्ण चकलेट र inscriptions पति, पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी संग यस्तो पोस्टर अनुकूल रूपमा, कि दोस्रो आधा छ।
के दर्ता मा मिठाई संग पोस्टर हुनुपर्छ
पोस्टर बाबजुद प्राप्तकर्ता को उमेर, उज्ज्वल र रंगीन हुनुपर्छ। आखिर, यस्तो उपहार - यो एक स्वतन्त्रित बाल्यकाल को आकर्षण सम्झना गर्न ठूलो अवसर हो। सबै उपलब्ध सामाग्री प्रयोग गर्नुहोस्। एक पोस्टर रंग एक कलाकार हुन छैन। एक मुद्रकमा पत्रिका र समाचार पत्र, पर्चा, सेक्विन, छाप्न पाठ र तस्बिरहरू फोटोहरू, कतरन लिनुहोस्। आफ्नै हातले बनाएको चकलेट र inscriptions संग पोस्टर, bestowed नाम समावेश गर्नुपर्छ। यस्तो "बधाई छ" वा "जन्मदिनको शुभकामना" को रूपमा ठूलो लेबल सानो कैंडी बाहिर राखे गर्न सकिन्छ।
मिठाई एक इच्छा वा Jokes सँगसँगै गर्न सकिन्छ। यो धेरै प्राप्तकर्ता ध्यान केन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। मान्छे अपमान गर्न ताकि, हास्य वर्ण को शब्दहरू हुन विशेष गरी होसियार रहनुहोस्। तल तिनीहरूले पिटे गर्न सकिन्छ भनेर उपहार र वाक्यांश को नाम संग सूची हो।
मीठो प्रस्तुत गर्न लेबल लागि विचार
"Twix" - "मीठो जोडी" वा दोस्रो आधा फेला पार्न इच्छा।
"Snickers" - जीवनमा सुस्त छैन।
"मंगल" - "सबै चकलेट हुनेछ", वा यो ग्रह मा भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ।
"Bounty" - जीवन स्वर्गीय आनन्द थियो। पोस्टर दोस्रो आधा लागि बनाएको छ भने यो फरक लेख्न सम्भव छ: "तपाईं अर्को स्वर्गीय खुशी लाग्छ।"
अन्डा "Kinder" - जीवन सुखद आश्चर्य को पूर्ण होस्। यो शिलालेख, inscriptions र चकलेट एक मित्र संग पोस्टर लागि आदर्श। प्राप्तकर्ता भने - दोस्रो आधा, त्यसपछि "Kinder" को प्रयोग गरेर, तपाईँले छोराछोरीको आसन्न उपस्थिति मा सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्रांडीको साथ चकलेट - "को intoxicating आनन्द गरौं।"
पैसा को रूप मा चकलेट - "जीवन प्रशस्त मात्रामा हुनेछ गरौं।"
"Skitls" - आनन्द (antidepressants) को लागि चक्की।
अन्य prezenty कसरी पिट्न
चिविङ गम - "गरौं टाउको ताजा समाधान को पूर्ण हुनेछ।"
फार्मेसी घाँस उत्तराधिकारी - आनन्द एलर्जी देखि।
फार्मेसी जडिबुटी chamomile - तनाव सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्न।
द्रुत पकाउने पास्ता - "भोक - मेरो चाची!"
hangover विरुद्ध गोली - "शुभ प्रभात हुँदैन।"
कमजोर कफी को झोला - "सेवा नरम तर invigorating हुनुपर्छ।"
रस "मेरो परिवार" - पनि शब्दहरू यहाँ superfluous छन्। यस्तो हामी तपाईंलाई बस चकलेट र inscriptions आमा वा बुबा संग पोस्टर मा गोंद गर्न सक्नुहुन्छ, शुरू।
के सामाग्री पोस्टर बनाउन आवश्यक छ
चकलेट, मिठाई र अन्य उत्पादनहरु (प्याकेजमा वेफर्स, को चमकता curd केक, पाउच मा कफी, एक प्याकेजमा चक्की, र यति मा। डी)।
Whatman कागज (गत्ता, निर्माण कागज वा फोल्डर)।
PVA गोंद ( "क्षण", एक हट बन्दूक वा डबल-पक्षीय टेप)।
रंग मार्कर (मार्कर, रंग)। वा पाठ मुद्रित गर्न सकिन्छ।
अन्य वैकल्पिक सजावटी तत्व (पत्रिका कतरन, rhinestones, साटन टेप, र यति मा। डी)
काल्पनिक र खुसी पार्न चाहन्छन्।
जहाँ आफ्नो हातमा चकलेट र संकेत संग एक पोस्टर बनाउन सुरु गर्न
तिनीहरूलाई रोचक वाक्यांश संग आउन उत्पादनहरु सूची लेख्न अग्रिम, र मात्र त पसलमा जाने वा पहिलो फरक व्यञ्जनहरु किन्न र काम को पाठ्यक्रम सपना र पाठ लेख्न: दुई तरिकामा जानुहोस्। विचार आफूलाई मन हुनेछ। प्रेरणाको लागि, तपाईं अन्य मालिकको, वा यस लेखमा फोटो मा देखाइएको उदाहरण को समाप्त काम देख्न सक्नुहुन्छ।
काम को मात्रा आकलन, तपाईं Whatman उपयुक्त ढाँचा लागि पसलमा जान सक्नुहुन्छ। यो एक ठूलो पोस्टर किन्न र त्यहाँ सानो फिट छ मा एक सानो भन्दा आवश्यक यदि यो ट्रिम, राम्रो छ।
निर्देशन: कसरी चकलेट र inscriptions एक पोस्टर बनाउन
सबै उपहार र पोस्टर अन्य सामान र सामाग्री संकलन गर्दा, तपाईं रचनात्मक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। सुविधाको लागि, यो तल्ला वा ठूलो तालिका बाहिर फैलाउन राम्रो छ। अब यसलाई खरीद मूल्याङ्कन गर्न समय।
एक चित्रकला कागज अगाडि राख्नु र उहाँलाई उपहार र अन्य रोचक कुरा मा फैलियो। परिणाम तपाईं अनुरूप छैन सम्म, आवश्यक रूपमा वस्तुहरू सार्न। तपाईं एक टाउको गर्न सँगैको वाक्यांश लेख्न विचार आउन भने, तिनीहरूलाई लेख्न निश्चित हुन। त्यसपछि तपाईंले तिनीहरूलाई भूल किनभने, स्मृति मा भरोसा छैन।
अर्को पानामा तपाईं सबै बाहिर राखिएको कसरी, वा एक तस्बिर लिन लेख्न।
डिजाइन सोच्नुहोस्: सकेसम्म पृष्ठभूमिमा खाली ठाउँ भर्न हुनेछ के।
त्यहाँ वाक्यांश लागि ठाउँ हुन् कति अनुमान। पाठ तपाईं आफ्नो हातमा चकलेट र संकेत संग एक ठूलो पोस्टर, बरु एउटा सानो फोल्डर, आयोजक बनाउन विशेष गरी यदि, ठीक हुनुपर्छ।
यो आवश्यक छ भने, पृष्ठभूमि रङ लगाउन। हामी ड्राई दिनुहोस्।
को प्रस्तुत र मुद्रित इच्छा गोंद। तपाईं हात द्वारा पाठ लेख्न चाहनुहुन्छ भने, यो बिस्तारै गर्छन्। अन्यथा, प्राप्तकर्ता, खुसी हुनुको सट्टा, लेखन पार्स हुनेछ। यो लाइन मदत गर्नेछ अक्षरहरू उचाइ र ढलान पालन। यदि आफ्नो क्षमता मा विश्वास छैन, पहिले सरल पेन्सिल आकर्षित, र केवल त्यसपछि रंग। ठूलो expressive वाक्यांश लागि कालो मार्कर वरिपरि कटौती गर्न सकिन्छ।
voids भर्न वा सुन्दर तस्वीर पेंट।
Congratulatory पोस्टर तयार छ!
एक "स्वादिष्ट" पोस्टर कसरी दिन
एक आश्चर्य व्यवस्था। एक प्रेम एक लागि आफ्नो हातमा चकलेट र संकेत संग एक पोस्टर बनाउन सिर्फ एक प्रमुख स्थानमा छोड्नुहोस्। प्राप्तकर्ता आफूलाई एक उपहार पाउनुहुनेछ।
तपाईं भोजमा अवधिमा वर्तमान दिन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि पोस्टर, जब सबै भेला गरिनेछ हात। दिन को लागि नायक उसलाई अनुरोध पढ्न गरौं। यस्तो उपहार सबै पाहुनाहरूसँग, अग्रिम गर्न सकिन्छ सँगै।
वितरण मा आश्चर्य। दूत प्ले र वर्तमान दिन एक मित्र सोध्नुहोस्। या तपाईं एक वितरण आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। प्राप्तकर्ता नजिकका बाँच्न गर्दैन, यदि र तपाईं आफूलाई बधाई सक्दैन यो विशेष गरी साँचो हो। तिनीहरूले आशा गर्नुभयो जब सामान्यतया चाखलाग्दा मान्छे पठाउने।
एक मानक र आवेकहिन इच्छा अर्को कार्ड को लागि बाहिर शीर्षक अघि, कि व्यक्ति थप उहाँलाई प्रेम बनाइएको वर्तमान, रूप, हतार मा कृपया किन्न छैन विचार गर्नुहोस्।
इच्छा खेलाडीहरूलाई - निष्कपट, दयालु, न्यानो शब्दहरू
वयस्क जन्मदिन लागि प्रतियोगिताहरूमा: एक छुट्टी स्मरणीय र रमाइलो बनाउन कसरी?
सबै-रूसी नागरिक रक्षा दिन (4 अक्टोबर): इतिहास र छुट्टी को सुविधाहरू
EGGER chipboard। सामाग्री को सुविधा र यसको प्रकार
"Lekker-आयोडिन": प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन
केटी को ध्यान कसरी आकर्षित गर्ने? चाल लागि गिर छैन!
बन्दागोभी संग सूप। गर्नेछ एक नुस्खा तपाईं प्लेट चाट्नेछन्
मनोविज्ञान मा धारणा को शारीरिक आधार